Ny faharoa lehibe mpikaroka paikady afaka mampiasa amin'ny angon-drakitra misy forecasting observational. Ny fampahafantarana momba ny hoavy dia tena sarotra be, ary noho izany antony izany, ny fizika dia tsy ampahany betsaka amin'ny fikarohana ara-tsosialy (na dia ampahany kely sy manan-danja amin'ny demografika, toekarena, ny epidemiolojia sy ny siansa politika aza). Na izany aza, te hifantoka amin'ny karazana fandrosoana manokana aho, izay antsoina hoe " currentcast" -n'ny fehezanteny avy amin'ny fampifangaroana "ankehitriny" sy "fandrosoana". Raha tokony ho efa naminavina ny ho avy, dia manandrana mampiasa hevitra avy amin'ny fampisehoana mba handrefana ny firenena ankehitriny izao tontolo izao; Miezaka ny "maminany ny ankehitriny" izy (Choi and Varian 2012) . Ny fehezan-dalàna dia manana fahafahana manokana indrindra ho an'ny governemanta sy orinasa izay mitaky fepetra ara-potoana sy ara-potoana amin'izao tontolo izao.
Ny toe-javatra iray izay ilàna ny filana ny fotoana sy ny fepetra ilaina mazava tsara dia ny epidemiolojia. Diniho ny trangan'ny gripa ("gripa"). Isan-taona, areti-mifindra gripa ara-pahasalamana isan-taona no miteraka aretina an-tapitrisany ary an'arivony maro no maty manerana an'izao tontolo izao. Ankoatra izany, dia mety hisy olona hipopotama amin'ny olona an-tapitrisany, isan-taona. Ny fipoahana vokatry ny gripa 1918, ohatra, dia novonoina teo anelanelan'ny 50 sy 100 tapitrisa (Morens and Fauci 2007) . Noho ny fitadiavana ny fitsaboana sy ny mety ho fihetsiky ny gripa dia ny governemanta manerana izao tontolo izao dia namorona rafitra fanaraha-maso ny gripa. Ohatra, ny Ivontoerana Amerikana momba ny Fanaraha-maso sy ny Fisakana ny Aretina (CDC) dia manangona tsy tapaka ny vaovao avy amin'ireo dokotera voafantina manerana ny firenena. Na dia mamokatra angona avo lenta aza ity rafitra ity, dia misy ny fiatrehana ny tatitra. Izany hoe, noho ny fotoana ilàna ny angon-drakitra avy amin'ny dokotera mba ho diovina, sy hipoitra, ary famoahana, ny rafitra CDC dia maminavina ny habetsahan'ny gripa efa roa herinandro lasa izay. Saingy, rehefa mandaitra ny areti-mifindra, ireo manam-pahefana misahana ny fahasalamam-bahoaka dia tsy te hahalala hoe ohatrinona ny gripa efa roa herinandro lasa izay; Tiany ho fantatra ny habetsaky ny gripa misy amin'izao fotoana izao.
Amin'io fotoana io ihany koa ny CDC dia manangona angona mba hanarahana ny gripa, dia manangona angona momba ny fihanaky ny gripa koa i Google, na dia amin'ny endrika hafa aza. Ny olona manerana izao tontolo izao dia mandefa mandrakariva ny fangatahana any Google, ary ny sasany amin'ireo fanontaniana ireo-toy ny "fitsaboana aretioka" sy ny "fitsaboana gripa" - dia afaka manondro fa ny olona manao ny fangatahana dia manana ny gripana. Saingy, amin'ny fampiasana ireo fikarohana ireo mba ahafantarana ny fihanaky ny gripa dia sarotra: tsy ny olona rehetra manana ny gripa no manao fikarohana momba ny flu, fa tsy ny olona rehetra voan'ny gripa no voan'ny gripa.
Jeremy Ginsberg sy ekipa mpiara-miasa (2009) , ny sasany ao amin'ny Google sy ny sasany ao amin'ny CDC, dia nanana hevitra manan-danja sy mampiavaka ny loharanom-baovao roa. Raha ny marina, amin'ny alalan'ny karazana alimy ara-statistika, ireo mpikaroka dia nampifangaro ny tahirin-tsakafo haingana sy tsy marina amin'ny data CDC miadana sy mazava tsara mba hamokarana haingana sy haingana ny tahan'ny gripa. Ny fomba iray hafa hieritreretana azy dia ny fampiasana ny angon-drakitra fikarohana mba hampihenana ny data CDC.
Amin'ny ankapobeny, nampiasa ny angona nanomboka tamin'ny 2003 ka hatramin'ny 2007, Ginsberg sy ireo mpiara-miasa dia nanombana ny fifandraisana misy eo amin'ny tahan'ny gripa ao amin'ny data CDC sy ny volan'ny fikarohana 50 tapitrisa miavaka. Hatramin'io dingana io, izay voarakitra tanteraka ary tsy nitaky fahalalana ara-pahasalamana manokana, nahita mpitsidika karazany 45 samihafa izay toa mahalaza ny taham-pahaizana momba ny gripa CDC. Avy eo, tamin'ny fampiasana ny fifandraisana izay nianarany tamin'ny antontan'isa 2003-2007, dia nandinika ny modely nataony i Ginsberg sy ireo mpiara-miasa nandritra ny vanimpotoan'ny grippe 2007-2007. Hitan'izy ireo fa ny fomba fiasan'izy ireo dia mety ho azo ampiasaina marina sy marina tokoa (sary 2.6). Ireo vokatra ireo dia navoaka tamin'ny natiora ary nahazo fitaratry ny gazety. Ity tetikasa ity-izay nantsoina hoe Google Flu Trends-dia nanjary fanoharana miverimberina momba ny herin'ny angona lehibe mba hanova izao tontolo izao.
2.6: Jeremy Ginsberg sy ny mpiara-miasa (2009) nampifangaro ny angon-drakitra Google tamin'ny data CDC mba hamoronana Google Flu Trends, izay mety hanaparitaka ny tahan'ny gripa toy ny aretina (ILI). Ny vokatra amin'ity tarehimarika ity dia ho an'ny faritra afovoan'ny Atlantika any Etazonia amin'ny vanim-potoanan'ny gripa 2007-2008. Na dia tena nampanantena aza ny voalohany, dia nihena ny fahombiazan'ny Google Flu Trends tamin'ny vanim-potoana (Cook et al. 2011; Olson et al. 2013; Lazer et al. 2014) . Nampifanarahina tamin'ny Ginsberg et al. (2009) , sary 3.
Na izany aza dia nanjary nahamenatra io tantara nahitana fahombiazana io. Rehefa nandeha ny fotoana dia nahita fetra roa lehibe ny mpikaroka izay mahatonga ny Google Flu Trends tsy dia mampihetsi-po noho ny niseho voalohany. Voalohany, ny hatsaran'ny Google Flu Trends dia tsy tsara lavitra noho ny an'ny modely tsotra izay manombantombana ny habetsaky ny gripa mifototra amin'ny dika mitovitovy amin'ny dingana roa vao haingana indrindra amin'ny fitsaboana gripa (Goel et al. 2010) . Ary, nandritra ny vanim-potoana vitsivitsy, ny Google Flu Trends dia tena ratsy noho ity fomba tsotra ity (Lazer et al. 2014) . Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny Google Flu Trends amin'ny angona rehetra, ny fianarana milina ary ny informatika matanjaka dia tsy nahavita nanamora ny heuristic tsotra sy mora kokoa. Izany dia manolo-kevitra fa rehefa manombantombana ny toetr'andro na ny fampiasana azy dia zava-dehibe ny mampitaha amin'ny fanombohana.
Ny fanoherana lehibe faharoa momba ny Google Flu Trends dia ny fahafahany maminavina ny angon-drakitra CDC dia nanelingelina ny tsy fahombiazan'ny fotoana fohy sy ny fahaverezan'ny fotoana lava noho ny drift sy ny algorithmika mifangaro . Ohatra, nandritra ny vanim-potoanan'ny gripan-kisoa 2009, ny Google Flu Trends dia nampihetsi-po tokoa ny habetsan'ny gripa, angamba satria ny olona dia manova ny fitadiavana fikarohana ho valin'ny tahotra lehibe amin'ny pandemic maneran-tany (Cook et al. 2011; Olson et al. 2013) . Ankoatra ireo olana saro-bidy ireo, dia nihena tsikelikely ny fahombiazany. Ny famakiana ny anton'izany faharavoana maharitra izany dia sarotra satria ireo algorithms amin'ny fikarohan'i Google dia manana propriété, saingy hita fa tamin'ny 2011 dia nanolotra soso-kevitra momba ny teny mifandraika i Google tamin'ny taona 2011 rehefa mikaroka ny fitsaboana gripo toy ny "tazo" sy "cough" ny olona. ity asa ity dia tsy mavitrika intsony). Ny fampidirana an'io endri-javatra io dia zavatra tsy misy dikany atao raha toa ka misy milina fikarohana ianao, saingy io fiovana algorithmika io dia nahatonga ny famoahana fikarohana bebe kokoa momba ny fahasalamana izay nahatonga ny trosan'ny Google Flu mba handresena ny tahan'ny gripa (Lazer et al. 2014) .
Ireo fepetra roa ireo dia manasokajy ny ezaka amin'ny famoahana ny hoavy, saingy tsy manadino azy ireo izy. Raha ny marina, amin'ny fampiasana fomba fitandremana bebe kokoa, Lazer et al. (2014) sy Yang, Santillana, and Kou (2015) dia afaka nanalavitra ireo olana roa ireo. Manantena aho fa ny fanadihadiana an-tserasera izay mampiaraka ny loharanom-baovao lehibe miaraka amin'ny angona nangonina dia ahafahan'ireo orinasa sy governemanta hamorona tombanana mendrika kokoa sy mendrika kokoa, amin'ny fampiasana haingana ny fepetra noraisina miverimberina amin'ny fotoana iray miaraka amin'ny vahaolana. Tetikasan'ny tetikasa toy ny Google Flu Trends koa dia mampiseho izay mety hitranga raha ampifandraisina amin'ny loharanom-baovao maromaro mifandraika amin'ny rakitra nentim-paharazana izay noforonina ho an'ny tanjon'ny fikarohana. Rehefa mieritreritra ny fiverenan'ny tantara ao amin'ny toko 1 ianao, dia manana ny fahafahana hampifangaro ny fomba amam-panao an'i Duchamp mitaingina fomba amam-panaon'ny Michelangelo mba hanomezana fanapahan-kevitra ireo mpandray fanapaha-kevitra amin'ny famaritana ny fotoana sy ny fomba fijery marina kokoa amin'ny ankehitriny sy ny faminaniana momba ny hoavy tsy ho ela.